Voadika ny 13 Aogositra 2018 3:00 GMT
Ny tena resahana be amin'ny lohahevitra ao amin'ny tontolon'ny bilaogy Toniziana tamin'ity herinandro lasa ity dia mazava ho azy fa ny fampisehoana nandiso fanantenana nataon'ny ekipa Toniziana tamin'ny Amboara Manerantany tao Alemaina rehefa nanao ady sahala tamin'i Arabia Saodita izy ireo.
Fanehoan-kevitra sasany amin'ny teny Frantsay avy amin'ny: Tunisian star, Adib, Anis, Nawarat, Assouma.
Tamin'ny fanamarihana matotra kokoa, manoratra momba ny fomba hikendren'i Tonizia hanafoana ny tsy fananan'asa manomboka izao hatramin'ny taona 2016 i Tarek, ary nanome toro-hevitra maro izy, tahaka ny firosoana kokoa amin'ny fanomezana ny orinasa hotantanin'ny tsy miankina sy ny iraisampirenena sy ny fanavaozana ny rafitry ny oniversite sy ny lalànan'ny asa.
Ho an'i Swifty indray, manontany izy hoe inona no maha-firenena? ary tsy inona izany fa miteraka fifamatorana eo amin'ny olona sy ny firenena, ampy hahatonga azy ho anisan'ny mari-panondroana. Fahaterahana ao amin'ny firenena iray izany, fiainana ao aminy amin'ny dingam-piainana sasany na vahoaka manodidina ilay olona?
Felsfa manoratra momba ny fiarahababa maraina amin'ny teny Toniziana “Sbah El Khir”, izay manazava betsaka kokoa fa tsy “miarahaba” fotsiny, midika izany fa ho tsara ny marainanao isan'andro: maoraly, materialy, anatiny, ivelany, vaovao tsara, fandraharahana, …sns.
Notohizany tamin'ny filazana fa tsy misahirana mifampiarahaba intsony ny olona ao Tonizia tao amin'izao andro izao, resahiny ihany koa ny fiheverany fa niova ratsy kokoa i Tonizia, miainga amin'ny marainany.
Amin'ny lafiny mazava kokoa, Heliodore manoratra momba ny fahitany ny tranonkala Toniziana TunisArts izay manome fahafahana hitroka ireo horonan-tsarimihetsika, tantara mitohy, tantara tsangana, mozika Toniziana sy ny hafa.
Zaratoustra mamoaka ny fandaharana amin'ny fetibe mozika Tabarka amin'ity taona ity, anisan'izany ny Fetibe Jazz Tabarka malaza.
Adib, bilaogera veterinera Toniziana, manoratra momba ny “Operation Monique 2”, izay notontosain'ny toeram-pitsaboany niaraka tamin-Rtoa Monique Busain nanomboka tamin'ny 17 hatramin'ny 23 Jiona, mba hampandroso sy hiaro ireo karazam-biby ao amin'ny faritra Kelibia. (FR)